Nambaran’ny fitsarana rosiana ny fandraràna ny Telegram, mihantsy, mitsiky… ary manahy ny mpisera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2018 5:38 GMT
Koa satria nandidy ny handrara ny fampiasa messenger an'ny Telegram ny fitsarana ao Moskoa tamin'ny 13 Aprily 2018, dia tahaka ny niezaka hanome antoka ny minisitra lefitry ny minisitry ny fifandraisana Alexey Volin: ho an'ireo te-hisera amin'ny alalany, “hitady ny fomba hanivahana izany fanakanana izany” ry zareo. Mba nitovy hevitra tamin'ny manampahefana rosiana ny mpisera Telegram tamin'ity indray mitoraka ity.
Na dia misy itovizana amin'ny fampiasa messenger an'ny WhatsApp aza, ny nahazoan'ny Telegram laza tao Rosia dia noho ireo “channels” [fantsona] sehatra famahanam-bolongana eo anelanelan'ny Twitter sy ny Facebook ao aminy izay mahasarika ireo mpanao famakafakana politika, mpanao gazety ary manampahefana. Fihariana eo am-piroboroboana [mg] ihany koa ny fantsona Telegram: ampiasaina matetika amin'ny ady politika sy ady ifanandrinan'ny orinasa ihany koa izy ireny. Nilaza ny Vedomosti, gazetim-pihariana iray, fa mety mitentina hatrany amin'ny 450.000 robla (7.500 dôlara amerikana) any ho any ny dokambarotra ara-politika (na ny fiporitsahana mpandrava) ao amin'ny fantsona tena malazan'ny Telegram.
Saingy tsy mitsahatra ny mamerimberina manohitra amin'ny feo mafy ny fitakian'ny sampandraharaham-piarovana rosiana hanajanona (na hanome) ny lakilem-panafenan-tsoratra messenger i Pavel Durov Filoha Tale Jeneralin'ny Telegram. Ary raha manakaiky ny farany ho tonga any amin'ny fanapahan-kevitra hanakana ny fampiasa ny tolona maharitra herintaona ifanaovan'ny Telegram sy ny manampahefana rosiana, nisy fahamaimaizana ary matetika lasa manamaivamaivan-javatra ny setrin'ny filazana.
“Rosia ihany no lasa firenena manankarena faharoa eto ambonin'ny tany aorian'i Shina! Fahafaharatsiny eo amin'ny sehatra manakana hatrany ny Telegram,” hoy ny nosoratan'i Kristina Potupchik, tompon'andraikitra teo aloha tao amin'ny hetsiky ny tanora pro-Kremlin nisahana ny fifandraisana tamin'ny gazety.
Nandray fijoroana feno fihantsiana, mandrisika ny mpanjohy azy hitady lalana hanivahana ny fanakanana ny fantsona maro. “Manakana antsika ry zareo, ary dia mihamatanjaka isika!” hoy i nosoratan'ny mpanoratra ny “Deer of Nizhny Novgorod,” fantsona iray mifantoka amin'ny politika ao amin'ny faritra Nizhny Novgorod tamin'ny 13 Avrily. Tahaka ireo fantsona maro hafa, nanome fanazavana amin'ny antsipiriany amin'ny fomba hanivahana amin'ny fanakanana Telegram amin'ny alalan'ny fampiasana VPN na Virtual Private Network ny “Deer of Nizhny Novgorod”. “Raha tsy nenibe ianao, dia ho afa-manao izany haingana sy mora,” hoy izy nanampy.
Milaza ihany koa ny Fantsona natokana amin'ny politika rosiana sy ny fomba fiasan'i Kremlin ao anatiny –ao anatin'ny malaza indrindra ao amin'ny sehatra– fa tsy manahy amin'ny fanakanana ry zareo. “Tokony ho ny 85% amin'ny mpisera no efa nametraka [VPN] iray ao anatin'ny 24 ora. Raha tsy manana ianao, dia ity ny torolalana,” hoy ny fantsona “Karaulny” (Mpiambina) tamin'ny mpanjohy 66.000+. Ny tompon'ny “Nezygar” (“Tsy i Zygar”, lalaon-teny amin'ny anaran'i Mikhail Zygar, Rosiana mpanao gazety ara-politika sy mpanoratra ny boky be mpividy All the Kremlin's Men) [Ireo lehilahin'i Kremlin rehetra], iray amin'ny fantsona ara-politika manana ny lanjany manana mpanjohy 133.000, niteny tamin'ny sehatra rosiana RBC fa ny fanakanana “no manamafy ny satan'ny Telegram ho sehatra mahaleotena.” “Hijanona eto amin'ny sehatra i Nezygar ary tsy hifindra any an-toerankafa,” hoy ny nampiany.
Nilaza ihany koa ny mpitarika an'i Tsetsenia, Ramzan Kadyrov, izay noraràna tsy hiditra Instagram tamin'ny desambra 2017, fa tsy hanao fanivahana amin'ny fanakanan izy. Nilaza tamin'ny sampam-panangonam-baovao rosiana TASS kosa i Kadyrov fa hifindra any amin'i “Mylistory,” mitovy karazana amin'i Instagram norafetina tao Tsetsenia [Chechnya] izy.
Heverina fa ireo mpifaninana hanao izay hahazoana ireo mpiseran'ny Telegram raha handao ny sehatra ry zareo dia ny Viber sy ny TamTam, fampiasa messenger roa izay manasongadina ny “fantsona” an-dry zareo ihany koa. Ny farany izay an'ny goavan'ny nomerika rosiana Mail.ru, nanararaotra ny fotoana namoaka dokambarotra tao amin'ny gazetim-pihariana rosiana telo tamin'ny andro nanambaran'ny fitsarana ao Moskoa ny fanakanana ny Telegram. Ao amin'ny Vedomosti sy ny Kommersant, mampiseho izao hafatra izao ny dokambarotra mameno pejy iray manontolo: “Raha ohatra fotsiny, eto izahay.” Somary voafantina kokoa ny dokambarotra ao amin'ny “Business Petersburg,” mivaky hoe “Fantsona in-2000 heny noho izay ato Petersburg,” manondro ny fantson-dranon'ny tanàna maro dia maro (izay voambolana iray ihany koa no ampiasaina amin'ny teny rosiana.)
Nanambara ihany koa ny Vkontakte, tambajotra sosialy rosiana malaza indrindra ao Rosia (novolavolaina sy natsangan'i Pavel Durov ihany koa izay tompon'ny Telegram) fa misy ny programa hampiroboroboana ny fantsona Telegram amin'ny mpamandrika mihoatra ny 1000 vonona ny hifindra ao amin'ny Vkontakte.
Tsy ny mpiseran'ny Telegram rehetra, anefa, no matoky fa ho tafavoaka velona tsy maninon-tsy maninona ny fampiasa. Nilaza tamin'ny sehatra RBC ny tompon'ny “Cello case” (milaza ankolaka ilay naman'i Putin hatry ny ela sady mpitendry lokanga feno Sergey Roldugin izay nanankarena tampoka tamin'ny fomba tsy mazava na tsy hay azavaina, araka ny nolazain'ny Panama Papers,) fantsona zohian'olona mihoatra ny 142000, fa mety hilatsaka hatrany amin'ny atsasany ny mpijery azy isan'andro raha ampiharina ny fanakanana. Nanoratra tao amin'ny Telegram ny Mash, fantsom-baovao manana mpanjohy mihoatra ny 280.000 natsangan'ny filoha lefitry ny Life, ampiran'ny fampitam-baovao pro-Kremlin teo aloha, fa hanohy amin'ny famoahana ao amin'ny fampiasa messenger izy… nialoha ny namoahany tampoka ny lisitry ny tambajotra sosialy hafa izay ijoroany ihany koa. “Mahatsapa mangana daholo ireo mpandrindra malaza,” hoy ny tompon'ny fantsona “Akitipol” (teny mivadiky ny teny rosiana hoe “politika”, zohian'olona mihoatra ny 15.000) tamin'ny fantsom-baovao 360.
Hatramin'izao aloha [fotoana namoahana ny lahatsoratra teny anglisy] mbola azo idirana ao Rosia ny Telegram, na dia misy aza ireo loharanom-baovao nilaza tamin'ny sampam-mbaovao Interfax fa mety manomboka mialoha toy ny amin'ny faha-16 avrily ny fanakanana.
16 ora izayEoropa Andrefana